Chivabvu 22, 2018 arun
Argentina bhangi anova wekutanga kushandisa Bitcoin kuti mutengi kwema
Today Argentina raMwari Banco Masventas, vaishanda pamwe Bitex Exchange, akava kubhangi wokutanga kushandisa Bitcoin kuti chaicho mutengi kwema, zvakananga muchinjikwa muganhu kubhadhara.
Zvinoita sokuti kuva wokutanga mumhuri bhengi munyika kubvumira vatengi kushandisa Bitcoin somunhu kubhadhara nezvechisarudzo. Maererano kubhengi, Vatengi zvino anogona kushandisa Bitex kutumira mari inopfuura 50 nyika yakasiyana isingasviki 24 maawa, pamwe muripo weUS 3% +VAT.
Poland unorembedza zvasarudzwa Kunyorwa cryptocurrency kwema
Rezvemari kuti wokuPoland kusunungurwa idzva mashoko pamusoro nyika mitemo mutero.
Zvizhinji zvikafadza Poland cryptocurrency vanoshandisa, kuti mitero iri kutengesa cryptocurrency kwave kwekanguva kutarira sezvo vakuru vakaona kuti inapplicable uye musoro mitemo mutero vaiva.